अर्थ/कर्पोरेट – Sanibar News
काठमाण्डौ – सुनको भाउ शुक्रबार तोलामा २ सय रुपैयाँ घटेको छ । सुन शुक्रबार तोलाको ६० हजार रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
बिहीबार तोलामा पाँच सय रुपैयाँ बढेर तोलाको ६० हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ शुक्रबार २ सय रुपैयाँ घटेको हो । चाँदीको भाउ भने बिहीबार घटबढ भएको छैन । चाँदी शुक्रबार पनि तोलाको ७ सय ४० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
धनगढी, २ माघ – प्रहरीले कञ्चनपुरस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र पुनर्बासबाट १८ किलो सुन बरामद गरेको छ। सुन ओसारपसारमा संलग्न दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर र कैलाली प्रहरी तथा अपराध अनुसन्धान महाशाखा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीको टोलीले १८ किलो सुन बरामद गरेको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक आभूषण तिम्सिनाले पुनर्बास नगरपालिका–२ दशरथ वस्तीबाट सुन बरामद गरिएको बताए। तिम्सिनाका अनुसार बिहान करिब ११ बजे सुन बरामद गरिएको र पक्राउ परेका अभियुक्तहरुमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको छ।
विराटनगर, २४ असोज : मोरङ व्यापार सङ्घको आयोजनामा विराटनगरमा हुने ‘विराट ट्रेड एक्स्पो–२०७५’ मा रु २५ करोड कारोवार हुने बताइएको छ ।
सङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आगामी पुस ६ देखि १४ गतेसम्म सञ्चालन हुने एक्स्पोमा भारत, श्रीलङ्का र स्वेदशका गरी २७५ वटा स्टल रहने मेला संयोजक अनुपम राठीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले रु एक अर्ब वा सोभन्दा बढीको पूँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गरी पूँजी बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
––आज संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा प्राइभेट इक्युटी, भेन्चर फण्ड र हेज फण्डलगायतका नयाँ संस्थालाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने उल्लेख गर्नुभयो ।
––– आज संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा प्राइभेट इक्युटी, भेन्चर फण्ड र हेज फण्डलगायतका नयाँ संस्थालाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने उल्लेख गर्नुभयो ।
एनआईसी एसिया बैंकको ‘स्विफ्ट ह्याक’गरी विदेशी बैंक खातामा रहेको ४१ लाख अमेरिकी डलर (करिब ४१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानीका लागि अर्डर भएको राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। उक्त रकममध्ये १० करोड भुक्तानी भइसकेको र बाँकी ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानीका लागि अर्डर मात्रै भएको अनुसन्धानमा संलग्न एक कर्मचारीले जानकारी दिए।
एनआईसी एसिया बैंकले स्विफ्ट ह्याक गरी रकम विदेश पठाएको जानकारी गराएपछि राष्ट्र बैंकले आइतबारदेखि अुनसन्धान थालेको हो। राष्ट्र बैंकको टोलीसँगै एनआईसी एसिया बैंकले पनि अनुसन्धानका लागि भारतबाट विज्ञ झिकाएको छ। राष्ट्र बैंक र एनआईसी एसिया बैंक दुवैले औपचारिक रूपमा घटनाको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा स्विफ्ट ह्याक गरेर विदेशमा रकम पठाएको यो पहिलो घटना हो।
नेपालमा स्विफ्ट ह्याक गरेर विदेशमा रकम पठाइएको यो पहिलो घटना हो।
‘स्विफ्ट ह्याकका विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ, अझै यकिन विवरण आइसकेको छैन, मंगलबार बेलुकासम्म सबै विवरण आउला’, पण्डितले भने। राष्ट्र बैंक भुक्तानी भइसकेको रकम पनि फिर्ता गर्न प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ। ‘कतिपय भुक्तानी फिर्ता भइसकेको पनि खबर आएको छ, राष्ट्र बैंकले रकम फिर्ता गराउन पहल गरिरहेको छ’, उनले भने। भुक्तानी भएको कतिपय रकम संस्थाको नाममा गएकाले फिर्ता लिन सकिने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ। केही समयअघि बंगलादेश, श्रीलंकालगायत देशमा पनि स्विफ्ट ह्याक गरी मोटो रकम चोरी भएको थियो। यसमध्ये अधिकांश रकम फिर्ता भएको थियो।
‘केही कर्मचारीको युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखियो, हामीले ती कर्मचारीई विशेष निगरानीमा राखेका छौं, उनीहरूको विदेशी बैंकमा खाता छ कि छैन ? यसअघि कारोबार भएको छ कि छैन ? भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौं’, राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो।
एनआईसी एसिया बैंकमा स्विफ्ट ह्याक गरी रकम विदेश पठाएको सार्वजनिक भएपछि निक्षेपकर्ता अलमलमा छन्। तर राष्ट्र बैंकले स्विफ्ट ह्याक भए पनि बैंकका निक्षेपकर्तालाई कुनै पनि असर नपर्ने सहप्रवक्ता पण्डितले जानकारी दिए। ‘यो स्विफ्ट ह्याकले बैंकको कारोबार पनि रोकिँदैन, निक्षेपकर्ता पनि डराउनुपर्दैन’, उनले भने, ‘बैंकमा निक्षेप राख्ने ढुक्क भए हुन्छ
एनआईसी एसिया बैंकले सोमबार ३१ गते सर्वसाधारणमा वित्तीय सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बृहत् वित्तीय सचेतना र्यालीको आयोजना गरेको छ ।
बैंकको कमलादी शाखाबाट सुरु भएको उक्त र्याली काठमाण्डौंको विभिन्न मुख्य स्थानहरुको परिक्रमा गर्दै पुनः कमलादी शाखामा पुगेर समापन भएको थियो । र्यालीमा बैंकको ६०० भन्दा बढी कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले हाल ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप ग्राहक, २८ हजारभन्दा बढी कर्जा ग्राहक ३ लाख ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी डिजिटल बैंकिङ्ग ग्राहकहरुलाई देशभर रहेका आफ्ना १ सय २८ शाखा एवं विस्तारित काउन्टर मार्फत् उच्चस्तरिय र ग्राहक केन्द्रित सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
बैंकले सदैव आफ्ना ग्राहकहरुको सर्वोपरि हितलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै विभिन्न आकर्षक, लाभदायी तथा ग्राहक केन्द्रित बैंकिङ्ग सेवा तथा सुविधाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई बचत खातामा वार्षिक ९ प्रतिशतसम्मको आकर्षक ब्याजदर प्रदान गर्दै आएको छ, जुन नेपाली वाणिज्य बैंकहरुले प्रदान गरेको ब्याजदर मध्येकै उच्च ब्याजदर रहेको छ ।